Utyalo lwaMandla lweNkqubo yokuHlulela kwaManzi kunye noVavanyo lwaManzi - iShanghai BOQU Instrument Co., Ltd.
Utyalo lwaMandla lweNkqubo yokuHluzwa kwaManzi kunye noMbane
Iibheyili zokuphehla amandla zisebenzisa izibaso ezinje ngamalahle, ioyile okanye igesi yendalo ukuva amanzi kwaye ngenxa yoko zivelisa umphunga, osetyenziselwa ukuqhuba umbane we turbine. Uqoqosho lokuveliswa kwamandla luxhomekeke kakhulu ekusebenzeni kwepetroli kwinkqubo yokuguqula ubushushu kwaye ke ishishini lokuvelisa amandla liphakathi kwabona basebenzisi baphambili beendlela zokusebenza ngokusekwe kuhlalutyo lwenkqubo ye-intanethi.
INKQUBO YOKUHLAZIYWA KWE-STEAM NAMANZI isetyenziswa kwizityalo zombane nakwezo nkqubo zorhwebo apho kufuneka khona UKULAWULA NOKUJONGA UMGANGATHO WAMANZI. Kwizityalo zamandla kuyadingeka ukulawula iimpawu zamanzi / zomphunga ukuze kuthintelwe ukonakala kumacandelo esekethe njenge-injini yomphunga kunye neebheyile.
Ngaphakathi kwisikhululo samandla injongo yokulawulwa kwamanzi kunye nomphunga kukunciphisa ukungcola kwesekethe, ngaloo ndlela kuncitshiswa umhlwa kunye nokunciphisa umngcipheko wokwenziwa kokungcola okuyingozi. Ke ngoko kubaluleke kakhulu ukulawula umgangatho wamanzi ukukhusela iidipozithi kwiibhanti zeinjini yiSilica (SiO2), ukunciphisa umhlwa ngokupheliswa kweoksijini (DO) okanye ukuthintela ukubola kweasidi yiHydrazine (N2H4). Ukulinganiswa kokuqhutywa kwamanzi kunika isibonakaliso sokuqala sokuwa komgangatho wamanzi, uhlalutyo lweChlorine (Cl2), iOzone (O3) kunye neChloride (Cl) esetyenziselwa ukulawula ukupholisa ukubulala iintsholongwane emanzini, ukubonisa umhlwa kunye nokufumanisa ukuvuza kwamanzi okupholisa kwi-condense iqonga.
Isisombululo se-BOQU kwiiparameter ezikhoyo kuzo zombini iinkqubo kunye nezisombululo zaselebhu
Unyango lwaManzi Umjikelo weStam Amanzi apholisayo
Izinto eziQinisekisiweyo eziQhelekileyo (TDS)
Ukuqina / iAlkaline Hydrazine /
Iyonke iCarbon Organic (TOC)
Izinto eziQinisekisiweyo eziMisiweyo (TSS) Amoniya
IHydrazine / iOxygen Scavenger
Iyonke iCarbon Organic (TOC) Ikloride
I-Chlorine / iiOxidants
Ukuqhuba / iyonke
Izinto eziqinileyo ezichithakeleyo (TDS)
Ubunzima / iAlkalinity
kunye nezinye iiNtsholongwane zokuNqanda
pH I-PHG-2081X kwi-pH yeMitha ekwi-Intanethi
Ukuqhuba Imitha ye-DDG-2080X yokuSebenza ngokuShishino
I-oksijini enyibilikisiweyo I-DOG-2082X iyinyibilikise imitha yeoksijini
Umgangatho I-GSGG-5089Pro kwi-Intanethi ye-Silicate Analyzer
Iphosphate I-LSGG-5090Pro yoHlaziyo lwePhosphate Analyzer
Isodium I-DWG-5088Pro kwi-Intanethi Imitha yeSodium
Ubunzima I-PFG-3085 ye-Intanethi yokuQinisa iMitha
IHydrazine (N2H4) I-LNG-5087 ye-Intanethi yeHydrazine yokuhlaziya